Global Voices teny Malagasy » Tetikasa vaovao ahitana loharanom-piarovana nomerika amin’ny fiteny Aymara avy amin’ny Global Voices teny Aymara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Oktobra 2020 15:53 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila, Victoria Gimena Tinta Quispe Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, lingua, Rising Voices
Vao haingana no nahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny Internews  ny Global Voices Aymara  mba hananganana hoenti-manana fiarovan dizitaly amin'ny fiteny Aymara ho an'ny tetikasa vaovao antsoina hoe Apthapi Digital. Milaza ny fomba fanao nentin-drazana amin'ny kolontsaina Andeana izay iarahan'ny fianakaviana mifampizara ny ampahany amin'ny vokatra notazany amin'ny hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fanangonana sy fametrahana izay azon'izy ireo atolotra mandritra ny fomba nentim-paharazana aguayo  (na lamba) ny teny hoe “Apthapi ” . Ao anatin'izany toe-tsaina mizara izany ihany, ankoatra ny fizarana fahalalana amin'ny hafa, dia kinasan'ity tetikasa ity ny hanatratra mpandray anjara vaovao izay tsy mba nahazo tamin'ny fomba mahazatra ny torohay fototra momba ny fiarovana nomerika.
Fiteny ampiasain'ny olona manakaiky ny roa tapitrisa ao amin'ny faritra Andeana ny Aymara, ao anatin'izany ny firenena Bolivia, Però ary Shily.
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra, mpikambana roa ao amin'ny ekipa GV Aymara dia ilay mpitantana ny tranonkala Victoria Tinta  sy ilay mpandika teny Elias Quispe Chura  no handika sy hanitsy ny lahatsoratra miisa dimy mifantoka amin'ny fiarovana fototra amin'ny finday, ny teny miafina saro-patarina, ny fitandremana amin'ny rindrampisompatra sy ny fisolokiana amin'ny aterineto, ny fomba fitetezana tranonkala azo antoka, ary momba ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny lahatahirin'ny tena manokana. Havoaka ao amin'ny pejy GV Aymara ireo loharanom-piarovana ireo miaraka amin'ny sary fandravahana manokana ataon'i Nicaela León, mpanakanto iray avy ao an-toerana izay mpiara-manorina ny tetikasa Phuyu . Nanoro hevitra momba io dingana io ihany koa ny mpikambana GV teny Espaniôla Jacobo Nájera  noho ny haizatra betsaka hitany teo amin'ny sehatry ny fiarovana nomerika. Hanampy amin'ny fandrindrana ny fampitaovana ny tetikasa ny Rising Voices.
Raha tokony nanangana hoentimanana vaovao hatrany am-boalohany dia hiara-hiasa amin'ireo fikambanana isa-paritra roa ny tetikasa, Código Sur , izay mamokatra loharanom-piarovana nomerika amin'ny teny Espaniola amin'ny alàlan'ny tetikasa antsoina hoe Milpa Digital . Ankoatra izay ny fikambanana ao Ekoadaoro Huaira  no nampiasa ireo loharanom-piarovana voalaza teo aloha ireo ary nandika azy ireo tamin'ny fiteny Kichwa tamin'ny alàlan'ny tetikasan'izy ireo Shigra Digital . Hanangana ireo loharanom-piarovana ireo ity tetikasa vaovao ity ary azo ampiasaina amin'ny lisansa Creative Commons.
Koa satria maro amin'ireo mpampiasa ny fiteny Aymara any Bolivia, Però ary Shily no sady tsy mamaky no tsy manoratra ilay fiteny dia tena zava-dehibe tokoa ny hanaovana izay ahafahana mahazo ireo hoentimanana vaovao voafangitra ireo. Hisy ny dikan'ny rakipeo fohy amin'ny fiteny Aymara ho an'ny mpihaino kinendry amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana mpamokatra fandaharana an'onjam-peo CEPRA  ao Cochabamba raha vantany vao vita ny fandikan-teny.
Avy amin'ny tetikasa teo aloha  notantanan'ny GV Aymara tamin'ny famokarana dika rakipeo tamin'ny fandikan-teny ny ampahany lehibe tamin'ny fandalinana ao ambadik'ity tetikasa ity. Fantatry ny ekipa fa ilaina ny fanatrarana ireo mpampiasa ny fiteny Aymara ireo izay mety tsy manana fifandraisana amin'ny aterineto matetika ary mampiasa sy mizara vaovao amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana am-bava.
Ary farany, hitarika hetsika fanentanana eo anivon'ireo fikambanana Aymara any Bolivia, Però ary Shily ny ekipa rehefa mandeha ny fivoaran'ny hoentimanana ka hangataka azy ireo hizara ireo hoentimanana ireo any amin'ny tambajotran'izy ireo sy ny mpikambana ao aminy. Hisy ny fifantohana manokana amin'ireo onjampeon'ny vondrom-piarahamonina izay mandefa fandaharana matetika amin'ilay fiteny.
Araho hatrany ny vaovao momba ilay tetikasa izay ho vita amin'ny voalohan'ny volana Novambra!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/10/08/149984/
 Global Voices Aymara: https://ay.globalvoices.org/
 tetikasa teo aloha: https://community.globalvoices.org/2015/07/repackaging-global-voices-posts-for-a-specific-listening-audience/